Maxaa ka soo baxay kulankii xalay looga arinsanayay talaabada laga qaadayo dowlada Ingiriiska? | Qaran News
Maxaa ka soo baxay kulankii xalay looga arinsanayay talaabada laga qaadayo dowlada Ingiriiska?
Writen by Qaran News | 12:30 pm 8th Jan, 2019
Waxaa habeenkii xalay kulan degdeg ah ku yeeshay Villa Soomaaliya Madaxweyne Faraamjo, RW Kheyre iyo koox lagu tilmaamay saaxibada Madaxweynaha. Kulanka ayaa looga arinsanayay talaabada ay dowlada Soomaaliya ka qaadayso dowlada Ingiriiska ka dib markii Wasiirka Gaashaandhiga dalkaasi uu safar aan lagala tashan dowlada Fedaraalka Soomaaliya uu ku tagay Somaliland. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in aan marnaba la qaadan karin in dowlada Ingriiska ay si cad ugu xad gudubto Madaxbanaanida iyo Qaranimada Soomaaliya.
Farmaajo ayaa yiri “hadii aan ka ogolaano in ay sidaa ay Dowlada Ingiriiksa ula dhaqanto Dowlada Soomaaliya ay u muuqanayso in aan raali ka nahay in dalka Soomaaliya la kala qeybiyo iyo isla markaana la fududeeyo aqoonsiga Soomaaliland”. RW Khyere ayaa ku taliyay in maalinta Isniinta loo yeero safiirka Ingiriiska fartiin culusna loogu dhiibo dalkiisa taas oo muujineysa in ay qalad ahayd in Wasiirka Dowlada Ingiriiska uu safar ku tago Gobol Soomaali ah. RW Kheyre ayaa sidoo kale sheegay in Wasaarada Arimaha Dibadda ee Soomaaliya uu ku amri doono in ay qorto qoraal canbaarayn ah oo looga soo horjeedo ficilada ay ku dhaqaaqday Dowlada Ingiriiska. Waxa uu yiri “marnaba ma aqabaleyno dhaqanka lagu wiiqayo qaranimda Soomaaliya”. Waxa uu ku daray “Ingiriisku waxa uu u arkaa Soomaaliya meel uu wali gumeysto danaha uu doonana uu ka fushado, hadii ay lama huraan noqotana xiriirka ayaan u jareynaa, iyaga ayaa noo baahan oo habeen iyo maalin nagala hadlo dano dhaqaale iyo mid siyaasadeed” isaga oo aad u xamaasadeysan ayuu ku daran “…Mudane Madaxweyne, Walaahi ayaan ku dhaartay hadii aan xiriirka u jarno iyaga oo garguuranaya ayaa ay noo imanayaa”
Safarka Wasiir Gavin Williamson waxa uu ahaa mid xanbaarsan ujeedooyin badan haba u badnaato in la tuso dowlada Soomaaliya in ayan ahayn awooda kaliya ee ka jirta dhulka Soomaalida. Dowlada Ingiriiska ayaa aad uga xumaatay talaabada uu Madaxweyne Faramaajo uu ku ceyriyay Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay Mudane Nicholas Heysom. Dowladda Ingiriiska ayaa isku daydey in ay ku qanciso Madaxweyne Farmaajo in uu ka noqdo go’aankiisa laakiin waa uu ku gacan seeyray.
Waxaan shaki ku jirin in asbuucyada iyo bilaha soo socdo Soomaaliya ay soo wajihi doonto culays siyaasadeed kaas oo dhibaato u keeni doono geedi socodka Siyaasada Arimaha Dibadda iyo gudaha ee Soomaaliya. Gaar haan hadii dowlada soo saarto qoraalka canbaareynta ee uu RW Kheyre balan qaaday in ay xukumadiisa soo saari doonto.